Isimada Punltand oo laga Codsaday in ay Taageeraan Nidaamka 4.5-ka – Radio Daljir
Maarso 28, 2016 2:53 b 0
Jariiban, 28, March, 2016-(Daljir)_Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid oo weli sii wada dadaalkiisa ku aadan socdaalka uu Garowe u yimi ayaa wararka madaxa banaan sheegayaan inuu shalay galab kulan la qaatay qaar ka mid ah isimadda Puntland, kullankaasoo ka dhacay aqalka Islaan Ciise Islaan Maxamed ee Garowe.
Kulankan oo saxaafada laga qariyay ayaa ku suntan sidii Isimada loogu sheegi lahaa inay ka qayb qaataan ka qayb galka Puntland doorashada 2016 iyo in la qaato nidaamka 4.5, kaasoo xal oo arkay in aqalka hoose lagu saleeyo.
Waararku waxay sheegayaan Isimadda inay arrintaasi ka biyo diideen una sheegay wasiirka koowaad inaysan hadda diid-mada 4.5 ka wada midaysan yihiin ayna adag tahay in go’aankaasi laga laabto.
Dhinaca kale wararka ayaa sheegay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya inuu ka mid yahay ragga u ordaya xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu gabaad kaga dhiganayo in Puntland ku taageerto lagana qayb galo doorashadaasi.
Ma jirto dhinaca kale war rasmi ah oo kasoo baxay kulamada goos goos ah ee madaxda DF iyo Puntland uga socda, waxaa lagu wadaa inay kulan rasmi ah labada dhinac yeeshaan isla markasna warbaahinta lala wadaago qoraal ka hadlaya socdaalka Ra’iisul Wasaaraha iyo waxa laga wada hadlay.
Maxamed Cabdi Cali oo ka mid ah aqoon yahanka ku nool magalada Garowe ayaa warbaahinta u sheegay inaysan hadda muuqaan sabab ay Puntland uga laabato go’aankeedii hore ee ay ku diiday nidaamka 4.5. balse waxaa socda dadaalo iyo cadaadis beesha caalamka ka imaanaya kaasoo madaxda Puntland lagu saarayo inay ka qayb galaan doorashada si looga dhamaytirmo.